निरन्तरका बर्षाले धनकुटाका विभिन्न स्थानमा क्षति – Dhankuta News : Daily Online News From Nepal
२०७७, ९ आश्विन शुक्रबार २१:३०
.धनकुटा असोज ९ । गत ५ गतेदेखिको निरन्तर बर्षाले धनकुटाका विभिन्न स्थानहरुमा धनमालको क्षति पु¥याएको छ । आज विहान अंन्दाजी १०ः०० बजेको समयमा धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ५ छुङदेन टोलमा एक घरलाई क्षति पु¥याएको छ । राजकुमार राईको छोरा लिलाबहादुर राईको ढुंगामाटोले बनेको टिनको छानो भएको १ तले घरको पर्खाल भत्किदा घर पुर्ण रुपमा क्षति भएको प्रहरी प्रमुख गोविन्द अधिकारीले जानकारी दिए ।
यस्तै राईकै अर्को ढुंगामाटोले बनेको टिनको छानो भएको २ तले घरको बार्दलीसमेत भत्किएको छ । यसका साथै घरको पर्खालहरु चर्किएको छ । घरलाई कुनै पनि समय क्षति पुग्न सक्ने देखिएकाले घरभित्रको सरसामानहरु सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घर भत्किएपनि मानवय तथा चौपायालाई भने कुनै क्षति नभएको जनाएको छ । तर, १० वटा कुखुरा भने पुरिएको छ । घर भत्किदा घर, खाद्यान्न, सरसामान, लत्ताकपडा, गरी अंन्दाजी ३५ लाख मूल्य बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै आज विहान अंन्दाजी १६ः३० बजे धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ४ श्रमिकटोलका रेवतीप्रसाद गुरागाईको २ तल्ले कच्चि घरमा आंशिक क्षति पु¥याएको छ । तर, अहिले सो घरमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेकोले प्रहरी टोलीको सहयोगमा घरभित्र रहेको सामान तथा मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै आज विहान ११ः०० बजेतिर माथिबाट झरेको पहिरोले साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं. ६ घण्टेस्थित कोशी लोकमार्ग केहि समय अवरोध भएको थियो । जानकारी प्राप्त हुनासाथ ईलाका प्रहरी कार्यालय भेडेटारबाट गएको प्रहरीको टोलीले जेसीवीको सहायताले पहिरो हटाई यातायात सुचारु गरेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुरेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।
यस्तै विहान ११ः४० बजेतिर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ५ रामबजार बस्ने विजय साहको टिनको छानो भएको, २ तले घर भत्किएको छ । घर पुर्ण रुपमा क्षति भएपनि मानवीय तथा चौपायालाई कुनै क्षति नभएको जनाएको छ । घर भत्किदाँ अंन्दाजी सात लाख बराबरको क्षति भएको लेगुवा प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै दिउसो १२ः२० बजे धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ५ बिहीबारे हटिया नजिक चानबहादुर लिम्बुको २ तले कच्ची घरको पुर्वपट्टीको भाग भत्किएको छ । घरलाई पुर्ण रुपमा क्षति भएपनि मानावीय तथा चौपायालाई भने क्षति नभएको जनाएको छ । घर भत्किदाँ अंन्दाजी पन्ध्र लाख मूल्य बराबरको भौतिक क्षति भएको घरधनी लिम्बुले जनाएको छ ।
यस्तै अविरल बर्षाले आज बेलुका १७ ः३० बजे धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित आँखा अस्पताल नजिकै कोशी लोकमार्गमा रुख लड्दा सडक केहि समय अवरोध हुन पुग्यो । सो रुखलाई प्रहरीको टोलीले सल्लेरी ब्यारेकसँग समन्वय गरी रुख काट्ने मेशिनद्वारा रुख काटेपछि यातायात सुचारु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै दिउसो १३ः४० बजेतिर धनकुटा नगरपालिका वडा नं. ९ मुलघाट नजिक चारगोलाई भन्ने स्थानमा कोशी लोकमार्ग अवरोघ हुन पुगेको थियो । माथिबाट झरेको पहिरोले सडक अवरोध भएको प्रहरीले जनाएको छ । जेसीवीको सहायताले पहिरो हटाई १४ः३० बजे एकतर्फी यातायात सुचारु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिका ५ बरडाँडा स्थित पाख्रीबास लेगुवा सडक खण्डमा पनि पहिरोले सडक अवरोध हुन पुगेको छ । सो सडकको पहिरो १४ः३० बजेतिर हटाएपछि दुबै तर्फी यातायात सुचारु भएको लेगुवा प्रहरीले जनाएको छ ।